आजको तस्वीर : बागलुङ सदरमुकाममा १०८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : बागलुङ सदरमुकाममा १०८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस !
२०७४ फाल्गुन २४, बिहीबार १५:०३	Top News, अन्य समाचार
सुमन जीसी, बागलुङ २०७४ फागुन २४ । आज मार्च ८ तारीख, अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस बागलुङ सदरमुकाम लगायत जिल्लाका विभिन्न भागहरुमा विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी मनाईएको छ । नेपालमा “आर्थिक सशक्तिकरण सहितको समाजिक जागरणः ग्रामीण तथा शहरी महिलाहरुको जीवनस्तरमा रुपान्तरण” भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गरी यो दिवस मनाईएदै छ ।
महिला दिवस सर्वप्रथम १९०९ फेबु्रअरी २८ मा मनाईएको थियो । १९९० मा महिलाहरुलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तराष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । आज मनाईएको १०८ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस हो ।
महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हिँजो फागुन २३ गते जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. बागलुङको आयोजना र अञ्चल स्थित प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको सहयोगमा महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । मुख्य दिन आज महिला तथा वालवालिका कार्यालय बागलुङ र राजनैतिक दलका महिला संघ ÷संगठनहरुको संयुक्त आयोजनामा ¥याली सहित बजार परिक्रम गरी बालमन्दिरमा पुगरे मुल समारोह गरी दिवस मनाईएको छ ।
तेश्रो गुल्मी महोत्सवमा हेलिकप्टरमा सयल गर्न पाईने